afrol News - Britain no yet convinced to lift Zim sanctions
Britain no yet convinced to lift Zim sanctions
afrol News, 4 March - British Prime Minister, Gordon Brown, has reportedly watered down any hopes of lifting sanctions against Zimbabwe unless there is a solid improvement on the country�s human rights record.
Reports following the meeting by visiting South African President, Jacob Zuma and his British head of government host, pointed that Mr Brown said sanctions against Zimbabwe will not be lifted until concerns about human rights violations and media restrictions are addressed.
As part of Mr Zuma�s state visit to Britain, he was also to discuss the Zimbabwean issue and ways that the country could be helped on the recovery road.
Zimbabwean President Robert Mugabe has maintained that part of the problems of the country, were exacerbated by the continued sanctions against him and his top aides.
Western countries have shrugged off any possible direct aid to Zimbabwe even after one year of the unity government in place saying there were no clear commitments to a politically improved and reformed Zimbabwe.
The Southern African state has come under scrutiny since is bogged land reform policy implementation which saw white commercial farmers chased out of their land from 2000 and their productive farms being handed over to Mr Mugabe�s supporters.